विदेशमा चम्कदै नेपाली ठिटो « Nepal – the country of the Buddha and the Mt. Everest
लेख/ रचना /निबन्ध (176)
English Section (1,144)
सन्नी लियोनीका कारण अस्ट्रेलियामा संसदिय उम्मेदवारी नै रद्ध ramkshrestha.wordpress.com/2019/09/20/sun… https://t.co/tIjJG2VG6m 1 day ago
सामाजिक क्षेत्रमा सँगै काम गरेका व्यक्तिको सम्झनामा डा. देवकोटा : थियो माटोप्रति अगाध प्रेम ramkshrestha.wordpress.com/2019/09/18/upe… https://t.co/KT4rbpK1Tq3days ago
श्रृंखलाले चमत्कार देखाउन पनि सक्छिन ramkshrestha.wordpress.com/2019/09/18/shr… https://t.co/ve0ePn0KD33days ago
पुटिन र मेद्भेदेभको नेपाली संस्करण ओली र प्रचण्ड बन्न सक्लान् ? ramkshrestha.wordpress.com/2019/09/16/%e0… https://t.co/TUpeBEsINj5days ago
नायिका स्वस्तिमा खड्काले चलचित्र ‘बुलबुल’मा गरेको उत्कृष्ट अभिनयका लागि श्रीलंकामा आयोजित सार्क फिल्म फेस्टिबलमा ‘… twitter.com/i/web/status/1…2weeks ago
चिया बेचेर आर्जेको तीन करोड दान गर्ने विन्देश्वर साह दम्पती ठूला ब्यापारी वा नेता वा सेलिब्रिटी हुन्थे भने उन्को यो… twitter.com/i/web/status/1…3weeks ago
Correct misleading message on Lumbini
Turkey Sex Video Scandal Forces Politicians To Resign
« किन टुङ्गिदैन बुद्ध जन्मस्थल विवाद ?
Nepali Origin Aruna Gurung bags Hong kong’s Chief Executive Award. »
तपाईंहरूलाई भेटाउँदै छु बागलुङमा जन्मेर, काठमाडौंमा हुर्के/बढे/पढेर मेटेरियल साइन्स (एप्लाइड फिजिक्स) मा स्नातकोत्तर गर्ने क्रममा फिनल्याण्डमा रहेका जनक सापकोटालाई । नेपाली मिडियामा त्यति नछाएका उनी फिनल्याण्ड र आयरल्याण्डका साहित्यकारमाझ भने राम्रैसँग परिचित छन् । उनका कृति अंग्रेजीका अतिरिक्त आइरिस र फिनिस भाषामा समेत प्रकाशित भएका छन् । फुटकर रचना त जापानी, स्विडिस भाषामा समेत अनुदित भएर छापिएका छन् । फिनल्याण्डमा केही महिनाअघि भएको प्रशिद्ध ‘टेम्परे बुक फेयर’ मा उनलाई आयोजकले अतिथिका रुपमा निम्त्याएको थियो । त्यसमा उनले हाइकु लेखनबारे आफ्ना अनुभव अरु साहित्यकारसामु बाँडेका थिए ।
पढाइ विज्ञान भए पनि यिनी मामा शम्भु कँडेलको प्रेरणाले सानैदेखि कविता लेख्थे । विज्ञानकै विद्यार्थी रहेका उनका मामा कविता/गजल लेख्थे । लामा खालका कविता लेख्दै आएका सापकोटाले पहिलो पटक हाइकु पढ्ने अवसर पाए । त्यो बि्रटिस सोसाइटीले प्रकाशन गरेको थियो । जापानी कविहरूले लेखनको सुरुआत गरेका हाइकु सुत्रवद्ध हुन्छन् । नेपाली कविताजस्तो जतिसुकै तन्काउन वा खुम्च्याउन पाइदैन । पहिलो हरफ ५ अक्षर, दोस्रो ७ र तेस्रो ५ अक्षर -सुत्र ५, ७, ५) मा आवद्ध त्यस्ता कविताले उनलाई आकर्षण गर्‍यो । ‘मलाई हाइकुले एक प्रकारको एडिक्सन नै गरायो, हालैको एक दिन स्काइपमा गफिँदै उनले सुनाए, म त्यसैमा डुब्न थाले । त्यो सन २००२ को समय थियो ।
यसैबीच उनले सन २००६ मा आयरल्याण्डमा अन्तराष्ट्रिय हाइकु प्रतिपर्धा हुदै रहेको थाहा पाए । उनले अनलाइनबाट र्फमका साथ आफ्नो हाइकु पठाए । संयोगले उनको रचना सर्वोत्कृष्ठ भयो । स्वदेशमै बसेर उनले अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता जिते । उनको खुट्टा भूईमा कसरी होस ! त्यसको तीन वर्षपछि भएको सातौ वाषिर्क युकाइ हाइकु प्रतिस्पर्धा (२००९) समेत उनले जिते ।
त्यसपछि उनी पढाइ अगाडि बढाउन फिनल्यान्ड गए । उनी त्यहाँ रहेको थाहा पाएर आयरल्याण्डबाट उनलाई लेखन कार्यशालामा निम्त्याइयो । सन २०१० का केही दिन उनले आवासीय सुविधामा लेखेका हाइकुहरूको संग्रह ‘फुल मुन’ प्रकाशन गरे । त्यसलाई आइरिस भाषाका सम्मानित कवि ग्याबि्रएल रोसेनस्टकले आइरिस भाषामा अनुवाद गर्न अनुमति मागे । ‘त्यस्ता सम्मानित कविले अनुवाद गर्छू भन्दा मेरो खुसीको सीमै रहेन,’ उनी सुनाउछन् । यो लिमिटेड इडिसन थियो । निश्चित प्रतिभन्दा बढी छाप्न नपाइने ।
भर्खरै उनको ‘ह्विस्पर अफ पाइन्स‘ नाममा अर्को कृति प्रकाशन भएको छ आइरिस र अंग्रजी गरी दुवै भाषामा । उनी त्यसको अनुवाद नेपालीमा समेत निकाल्ने तयारीमा छन् । उनका केही रचना स्विडिस र जापानी भाषाका पत्रिकामा समेत अनुवाद भएर छापिएका छन् । इन्टरनेसनल हाइकु जर्नलको अनलाइन सस्करणमा अंग्रेजी र नेपालीमा अनुवाद उनका हाइकु पढ्न पाइन्छ । गुगल गर्दा उनलाई चिनाउने विदेशबाट प्रकाशित अनगिन्ती वेभसाइटका पेज भेटिन्छन् ।
उनको कृति विश्वप्रशिद्ध डिजिटल पुस्तक विक्रेता कम्पनी अमेजन डटकमको स्टोरबाट किन्न सकिन्छ । अमेजनले सापकोटाको ‘हविस्पर अफ पाइन्स’ को मूल्य इन्टरनेटबाट खरिदका लागि ६ डलर ५४ सेन्ट मूल्य तोकेको छ । अहिले उसले १ डलर ३१ सेन्ट मूल्य छुट दिएर ५ डलर २३ सेन्टमा बेच्ने अफर ल्याएको छ । यो पुस्तक किन्डल इडिसनमा उपलब्ध छ ।
विज्ञान पढेको ब्यक्ति साहित्यमा लागेर के पायो त ? केही पाउने चाहनाले लेखेको हैन, उनी तर्किन्छन्, मैले सबैभन्दा ठूलो सन्तुष्टि पाएको छु । विदेशमा समेत अरुसामु चिनिन पाएको छु ।
नेपाली कवि कसरी विदेशी भाषातिर आकषिर्त भयो ? उनले सुरुमा नेपालीमै लेखेका हुन् । ‘नेपालीमा लेख्दा त्यतिधेरै प्रतिक्रिया आएन,’ उनले सुनाए, ‘अंग्रेजीमा लेख्न थालेपछि भने त्यसको बाढी नै लाग्यो ।’ अहिले विदेशी पत्रिकाहरूमा मेरा रचना छापिन्छन । राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ ।’ नेपाली ठिटो हाइकुमा चर्चित भएको थाहा पाएर बल्र्ड हाइकु क्लवका अध्यक्ष जापानी नागरिकले सम्पर्क गरेर उनलाई स्यावासी दिए । उनको कृतिको क्लवले प्रकासन गर्ने वल्ड हाइकु रिभ्युमा समिक्षा प्रकाशन भएको छ ।
उनका लागि लेखन ‘पार्ट टाइम जव’ जस्तै छ । उनी स्नातकोत्तर सक्ने तरखरमा छन् । उनले भविश्यमा विज्ञानका क्षेत्रमा लाग्ने वा हाइकुमै रमाउने भनेर निर्धारण गरिसकेका छैनन् । ‘लेखनले चिनाएकाले त्यो छेत्र छाड्ने कुरा आउदैन,’ उनले भने, ‘पढेको ज्ञानलाई पनि प्रयोग गर्नै पर्छ । भविश्य निर्धारण गर्न समयलाई छाडिदिने सोचेको छु ।’
उनी कस्तो समय/मुडमा लेख्न रुचाउछन् ? ‘प्लान गरेर लेखिदैन,’ उनी टक्टकिन्छन्, ‘जे देखिन्छ, त्यसैलाई लेख्ने हो । म खासमा नेचरलाई थिम बनाएर लेख्छु ।’
रिडर बाबु र त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी अधिकृत आमाका जेठा छोरा उनको लेखनमा परिवारिक वातावरणको पनि प्रभाव परेको छ । सापकोटालाई सानैदेखि साहित्यमा लाग्न प्रेरित गर्ने मामा शम्भु भान्जामा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आफूलाई अब्बल प्रस्तुत गर्ने गुण सानैदेखि देखापरेको बताउँछन् । ‘उनी सानो हुदै मैले लेखेका कविताको केस्राकेस्रा केलाइ दिन्थे,’ उनले सम्झिए, ‘साहित्यमा उनको त्यतिखेरै गहिरो रुची थियो ।’
This entry was posted on July 5, 2012 at 11:17 am	and is filed under समाचार. Tagged: 'ह्विस्पर अफ पाइन्स', Alan Titley, ग्याबि्रएल रोसेनस्टक, जनक सापकोटा, टेम्परे बुक फेयर, Buddha, Full moon, Gabriel Rosenstock, Ion Codrescu, Janak Sapkota, Nepalese haikuist, Susumu Takiguchi, Whisper of Pines, World Haiku Club. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.